အ၀တ်အစားဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများ - အပိုင်း (၁) - Myanmar Network
အ၀တ်အစားဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများ - အပိုင်း (၁)
Posted by Language Republic on July 2, 2015 at 13:15 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အဝတ်အစားဖြစ်စေ၊ ဖက်ရှင်နဲ့ ပတ်သက်လို့ပဲ ဖြစ်စေ လက်တွေ့ပြောဆို အသုံးပြုနိုင်သော ဝေါဟာရများကို အောက်ပါတွင် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
To be on trend = အလွန်ခေတ်မီ၊ ခေတ်ဆန်သော
E.g His fashion designs are very on trend. (သူ့ရဲ့ ဖက်ရှင် ဒီဇိုင်းတွေက အရမ်းခေတ်မီတာပဲ။)
Casual clothes = ထသွားလာသွားအဝတ်အစား၊ တခမ်းတနားမဟုတ်သော/နေ့စဉ်ဝတ်ပေါ့ပါးသက်သက်သာသာရှိသော အ၀တ်အစား
E.g Casual clothes are suitable for everyday wear rather than formal occasions. (ထသွားလာသွားအဝတ်အစားများသည် ပွဲလမ်း၊ အခမ်းအနားရှိတဲ့အချိန်မှာ ၀တ်တာထက် နေ့စဉ်ဝတ်ခြင်းက ပိုသင့်တော်ပါတယ်။)
Classic style = အမြဲတမ်းခေတ်မီနေသည့် ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်နှင့် ရိုးရာမပျက်သော ပုံစံ
E.g A classic style of clothes is beautiful inavery simple way and always be fashionable. (Classic ပုံစံရှိသော အ၀တ်အစားများသည် ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်နှင့် လှပကြ၍ အမြဲတမ်းခေတ်မီနေပါတယ်။)
Designer label = လူသိများပြီး (အများအားဖြင့် ဈေးကြီးသော) အ၀တ်အစားများထုတ်လုပ်သော ကုမ္ပဏီ
E.g Our aim is to make this one of the world's great designer labels. (ကျွန်တော်တို့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဒါကို ထူးကဲပြီး လူသိများတဲ့ ကမ္ဘာ့ အမှတ်တံဆိပ်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်လာအောင် လုပ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။)
Dressed to kill = ပိုးပန်းသူများကို ဆွဲဆောင်သော အ၀တ်အစားများကို ၀တ်ခြင်း
E.g Tanya came in, dressed to kill in scarlet. (တန်နီယာ ၀င်လာခဲ့ပါတယ်။ လူတကာ ငေးလောက်စေတဲ့ အနီရဲရဲဝတ်စုံနဲ့ပေါ့။)
To dress for the occasion = တစ်စုံတစ်ရာသော အခမ်းအနားအတွက် သင့်တော်သော အ၀တ်အစားများဝတ်ခြင်း
E.g It's the type of hotel where you dress for dinner. (ဒီဟိုတယ်ကတော့ ညစာစားရန်သွားတဲ့အခါ သင့်တင့်သော အ၀တ်အစားကို ၀တ်ဆင်ရတဲ့ ဟိုတယ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။)
fashionable = ခေတ်မီသော/ရေပန်းစားသော
E.g A fashionable couple posed at the next table. (ခေတ်ဆန်တဲ့ စုံတွဲတစ်တွဲက ဘေးစားပွဲမှာ ကိုယ်ဟန်ပြနေကြတယ်။)
Fashion house = (ပုံမှန်အားဖြင့် ဈေးကြီးသော) အ၀တ်အစားစတိုင် အသစ်များကို ရောင်းချသော ကုမ္ပဏီ
E.g Within years, Sally was head of her own fashion. (နှစ်တွေအတွင်းမှာပဲ ဆယ်လီက သူ့ကိုယ်ပိုင်အ၀တ်အစားအသစ်အဆန်းရောင်းချတဲ့ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဖြစ်ခဲ့တယ်။)
Fashion icon = ဖက်ရှင်အမြင်ရှိသောကြောင့် ကျော်ကြားသော ပုဂ္ဂိုလ်
E.g The fashion icon winner lived up to her reputation inasparkly, see-through and utterly fabulous gown. (အနိုင်ရသွားသော fashion icon က သူ့ဂုဏ်သတင်းနှင့်လိုက်ဖက်အောင် ၀င်းလက်တောက်ပပါးလှပ်ပြီး လုံးဝကို ထူးကဲတဲ့ ပွဲတက်ဂါဝန်ကို ၀တ်လာတယ်။)
Fashion show = ကိုယ်ဟန်ပြမယ်များက နောက်ဆုံးပေါ် ဖက်ရှင်ပုံစံတွေကို ၀တ်ဆင်ပြသသောပွဲ
E.g Indian designers recently organizedafashion show in Hong Kong as part ofasales promotion. (အရောင်းမြှင့်တင်မှုရဲ့ ကဏ္ဍတစ်ရပ်အနေနဲ့ အိန္တိယဒီဇိုင်နာတွေက ဟောင်ကောင်မှာ ဖက်ရှင်ပြပွဲတစ်ခု မကြာသေးခင်ကပဲ စီစဉ်ကျင်းပခဲ့ကြတယ်။)
To get dressed up = အများအားဖြင့် ထူးခြားတဲ့ နေရာတစ်နေရာရာသွားဖို့အတွက် ၀တ်ကောင်းစားလှများ ၀တ်ဆင်ခြင်း
E.g He was all dressed up, like he was going somewhere fancy. (သူက ထူးခြားတဲ့ နေရာတစ်နေရာရာသွားမယ့်ပုံနဲ့ ၀တ်ကောင်းစားလှတွေ ၀တ်ထားတယ်။)
To go out of fashion = နောက်ထပ် ခေတ်မမီတော့ခြင်း
E.g Fur coats have gone out of fashion. (သားမွေးကုတ်အင်္ကျီတွေက ခေတ်မမီတော့ပါ။)
Hand-me-downs = အစ်ကိုအစ်မတွေဝတ်ပြီးသား အ၀တ်အစားတွေကို ညီငယ်ညီမငယ်တွေကို ချပေးသောအ၀တ်အစားများ
E.g Claudia had three sisters, so she worealot of hand-me-downs. (ကလော်ဒီယာမှာ အစ်မသုံးယောက်ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် သူက အ၀တ်အစားအကျတွေ အများကြီးဝတ်ခဲ့ရတယ်။)
To have an eye for (fashion) = ကောင်းစွာ ဝေဖန်အကဲဖြတ်တတ်ခြင်း
E.g She has an eye for fashion. (သူက ဖက်ရှင်ကို ကောင်းကောင်း နားလည်ပြီး အကဲဖြတ်ဝေဖန်တတ်တယ်။)
to haveasense of style = ကျော့မော့ပြီး ခေတ်မီသော အ၀တ်အစားများကို ၀တ်နိုင်စွမ်းရှိခြင်း
E.g Withalittle effort, every woman can develop her unique sense of style, which means to have the right look at any situation, all the time. (နဲနဲလေးသာ အားစိုက်လိုက်ရင် အမျိုးသမီးတိုင်းက သူ့ကိုယ်ပိုင် တမူထူးတဲ့ ကျော့ရှင်းခေတ်မီတဲ့ ပုံစံကို ရယူနိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ အမြဲတမ်းပဲ ဘယ်အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ၄င်းနှင့်သင့်တော်သော ပုံစံ ဖြစ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။)
The height of fashion = အလွန်တရာခေတ်မီခြင်း
E.g Jeans were once again the height of fashion. (ဂျင်းတွေက နောက်ထပ်တဖန် ခေတ်စားပြန်ပါပြီ။)
ဤဆောင်းပါးကို ieltsspeaking.co.uk မှ IELTS Clothes & Fashion Vocabulary ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။